Bitsik’ireo Afgàna: Adin’akoholahy, Ririnina, ary Sisintany Tsy Milamina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Oktobra 2017 6:19 GMT
Miresaka mombanà fanatanjahantena iray vaovao ao Afganistana i Afghan Lord, dia ny adin'akoholahy.. Afaka mijery lahatsary iray mampiseho adin'akoholahy ianao ao amin'ny bilaogin'i Afghan Lord. Manampy ilay bilaogera fa,
fanatanjahantena nentim-paharazana fanao amin'ny ririnina ny Morgh Janngi izay midika hoe adin'akoholahy, tahaka ny adin'alika, rameva, na koa ny hazakazaka ampondra. Amin'ny Morgh Janngi, tonga avy manerana an'i Afganistana ireo lehilahy (ihany) mba hampiditra ny akoholahiny sarobidy ao amin'ny kianja Kabul. Sarotra ny fepetran'ny Morgh Janngi, mahery setra ny habibiany ary mety ho lafo ho an'ireo mpiloka mandray anjara. Manana vondrona mpanohana tsy ara-dalàna ny ankamaroan'ireo mpifaninana, izay manampy mampiakatra ireo antoka amin'ny loka sy miaro na manohitra ny fanapahankevitra momba izay akoholahy mandresy. Miady ireo akoholahy mandra-pisian'ny rà milatsaka, avy eo dia haka ny akohony hiala ny ringa ny tompony, hitsabo ny ratran'ireo biby ary hamelombelona azy indray miaraka aminà rano indraim-bava atsipy eo amin'ny tarehin'ireto akoholahy. Tsy mora ny vidin'ny fifaninanana, mampidi-kizo ny volany ireo lehilahy amin'ny vokatra isaky ny adin'akoho, indraindray manao antoka 100.000 ka hatramin'ny 200.000 Afghanis (Ar 5.900.000 – Ar 11.800.000). Indraindray mafana dia mafana ao amin'ny toerana filokàna hany ka tafakatra mihoatra ny 5000 dolara (Ar 14.750.000) ny vola ataon'ireo vondrona antoka.
Eto ianao raha te-hahita sary maro misy ireo adin'akoholahy.
Mpanao gazety mahaleotena no sady bilaogera ao Afganistana i Onne Parl. Milaza io bilaogera io fa ny hatsiaka no lohahevitra lehibe indrindra eo amin'ireo vahoaka Afgàna sy ny iraisam-pirenena. Manampy ilay bilaogera fa :
Miara-mijaly isika. Toa tsy mahafantatra ny atao hoe varavarankely misy fitaratra roa sosona ireo Afgàna, ka manarona ny varavarankelinay amin'ny plastika izahay. Fomba fanao iraisana izany aty.
Vao haingana izay, samy nandà ny tetika Pakistaney hametraka vanja milevina sy hanangana fefy any amin'ireo ‘faritra voafantina’ manaraka ny sisintany 2.400 km manasaraka azy amin'i Afganistana na ny governemantan'i Afganistana na ny Firenena Mikambana. Manohana io fanapahankevitra Pakistaney io i Notes from the West ary milaza fa ny fanaovana varo-maizina sy ny zavamahadomelina no hany zava-mitranga any amin'ireo faritra sasany ao amin'ilay faritanim-poko io. Afaka mijery sary maro misy io faritanim-poko io ianao ao amin'ny bilaoginy.